အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: စေတနာတိုင်းသည်.......လူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်
စေတနာသည်.....လူတိုင်းနဲ့ မထိုက်တန် ဆိုပြီးတော့ လူတွေပြောလေ့ ပြောထရှိပါတယ်...။ ဆောင်ပုဒ်တွေ ရေး ပြီးတော့ တချို့က ကိုယ့် ရုံးစားပွဲတို့ ၊ ဆိုင်တို့ဒါမှမဟုတ်....အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကပ်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်....။ ဘာလို့ ဒီလိုကပ်ထား တာလဲလို့ မေးကြည့်တော့...။ သူတို့က ငြီးပြောလေး...ပြောပြကြတယ်။ လူတွေဗျာ....စေတနာနဲ့ မတန်ဘူးတဲ့ တချို့က၊ လူတိုင်းကို စေတနာထားလို့ မရဘူးဗျာတဲ့ တချို့ကပြောကြပါတယ်..။ အဲဒီလိုပြောကြတော့.......မေးတဲ့သူတချို့က ပြန်ပြောကြပြန်တယ်..။ လူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စေတနာထားလိုက်ပေါ့ဗျာ...တဲ့။
စေတနာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးပေါ်မှာ တင်ပဲ အမြင်တွေ မတူဘူးဖြစ်နေကြတယ်..။ ဒါနဲ့ စေတနာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ကျွန်တော် သိချင်လာပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်..။
- စေတနာဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ...................?
- စေတနာဆိုတာ ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲ.........?
- စေတနာ ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ပေါ်လဲ........?
- စေတနာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ...................?
စေတနာ ဆိုတာ ပါဠိစကားပါ..။ မြန်မာလို သိခြင်း၊ စေ့ဆော်ခြင်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း၊ စေတနာ လို့ အဘိဓာန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ စိတ်တခုခုကို ဖြစ်ပေါ်ရေရန် စေ့ဆော်ပေးတဲ့ စေတသိက်တစ်မျိုး ပါပဲ။ အာရုံပေါ်သို့ ယှဉ်ဖက်စေတသိက်တရားတို့ကို ရောက်အောင် စေ့ဆော်ပေးခြင်း၊ နှိုးဆော်ပေးခြင်းသဘော လို့လည်း ဆရာတော်ကြီးများဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ကောင်းမှု ဖြစ်စေ၊ မကောင်းမှုဖြစ်စေ အထမြောက်အောင် စေ့ဆော်ပေးတဲ့ အရာကို စေတနာလို့ ဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ သိတာက ပေးချင်၊ ကမ်းချင်၊ လှူချင်တန်းချင်၊ ကူညီချင်တာမှ စေတနာလို့ ထင်ခဲ့ကြပါသည်။ အလွဲကြီးလွဲနေပါသည်။ သူ့ မူရင်း အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကောင်းတာပဲလုပ်လုပ်၊ ဆိုးတာပဲပြုပြု အထမြောက်အောင်နှိုးဆော် ပေးတာကို စေတနာလို့ ခေါ်ပါသည်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူမွေးနေ့မှာ....သူပျော်သွားအောင် သူပြောပြောနေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခု အမှတ်တရ ၀ယ်ပေးချင်နေတာ စေတနာပါ။ အဲလိုဝယ်ပေးဖို့ ငွေကြေး မပြည့်စုံလို့ ငွေကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရှာမယ်။ လိမ်ချင်လိမ်ရပါစေ၊ ခိုးချင်ခိုးရပါစေ၊ သူပျော်သွားအောင် အဲဒီပစ္စည်းလေးကိုယ ၀ယ်ကို ၀ယ်ပေးမယ်ပြီး စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားရင် သူ့မှာ စေတနာ နှစ်မျိုးဖြစ်နေပါပီ။ ချစ်သူပျော်စေချင်တဲ့ ပေးချင်တဲ့ မေတ္တာဦးစီးတဲ့ ကုသိုလ် စေတနာရယ်၊ ခိုးဖွက်လိမ်ကောက်ချင်တဲ့ လောဘဦးစီးတဲ့ အကုသိုလ်စေတနာရယ် ဆိုတဲ့ နှစ်မျိုးပါ။ သူတစ်ပါးကိုပေးချင်တဲ့ ပျော်စေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာ အထမြောက်ဖို့အတွက် ကျန်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသဦးစီးတဲ့ အကုသိုလ်စေတနာတွေပါ တွဲလာပါတယ်။ ဒါဆို စေတနာ အဖြုနဲ့ အမဲ ရောသွားတဲ့သဘောပါ ။ မကောင်းပါဘူး၊ ရောတဲ့အတွက် ကိုယ်ပြန်ရတဲ့ အကျိုးပေးမှာလည်း အကောင်းအဆိုးရောတဲ့ အကျိုးပေးမျိုးပဲ ပြန်ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ စေတနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကလေးကို ပြောပြပါမယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့  မွေးနေ့ဆိုတဲ့ အာရုံကို ကိုယ်စိတ်နဲ့ တိုက်တဲ့အချိန်မှာ အတွေးတွေ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖြစ်လာတဲ့အတွေးတွေထဲမှာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး အလိုအပ်ဆုံး အကြိုက်ဆုံး ဆိုတဲ့အရာကိုပေးချင်တဲ့ စိတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ စိတ်ဟာ စေတနာပါပဲ။
မွေးနေ့ ဆိုတဲ့အာရုံနဲ့ ကိုယ်စိတ်နဲ့ တိုက်တဲ့နေရာဟာ.....ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာ.. ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာ ပါ။ ဒါကြောင့် စေတနာ ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာ မြစ်ဖျားဟာ နှလုံးသားပါ။
ကိုယ်ချစ်သူဆိုတဲ့အာရုံ၊ မွေးနေ့ဆိုတဲ့အာရုံ၊ ငွေကြေးဆိုတဲ့အာရုံ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ အာရုံတွေနဲ့ ကိုယ်စိတ်တို့ဟာ စေတနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ ကောင်းတဲ့စေတနာဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတဲ့စေတနာပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ်လာတဲ့အာရုံ တွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်အခံဓာတ်တို့ တွေ့ဆုံခြင်းကြောင့် ပေါ်လာတာပါပဲ။
ပေးချင်တာ၊ လိုချင်တာ ။ လွတ်မြောက်စေချင်တာ၊ ချုပ်နှောင်ချင်တာ။ ချစ်တာ၊ မုန်းတာ။ တွယ်တာတာ၊ စွန့်ပစ်တာ။ ကြည်ဖြူတာ၊ အမြင်ကပ်တာ။ အဲဒါတွေအားလုံး စေတနာတွေပါ။ သူတစ်ပါးကို ဖြစ်စေလိုတဲ့ စိတ်စေတနာတွေပါ။ ဒါကြောင့် စေတနာတိုင်းသည် လူတိုင်းနဲ့ မတန် လို့ပြောချင်တာပါ။
posted by အတ္တ @ September 20, 2009 1 Comments
At September 27, 2009 at 1:25 AM , ဝက်ဝံလေး said...
word verification ဖြုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ငါ ပြောင်းရိုက်နေရတယ် မန့်တင်လိုက်ရင် ချက်ချင်းမတက်ဘူး ငါ မစိတ်မရှည်ပါ အဲဒါ လေး လုပ်ပေးပါ
စေတနာသည် လူတိုင်းနဲ့ မတန် မှန်ပါတယ် နင်ရေးတာလေးတွေ ကောင်းတယ်သိလား တကယ်ပြောတာ